कोरोनाले मानिसलाई के सिकाउँदैछ ? संसारलाई बिल गेट्सको शक्तिशाली १४ सन्देशहरु - Sidha News
एजेन्सी। कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न गत महिना विश्व धनाढ्य व्यक्ति बिल गेट्सले आठ करोड ५० लाख डलर सहायता रकम दान गरेका थिए। यो सबै विनाश र विपदको पछाडि आध्यात्मिक रहस्य रहेको पनि बिल गेट्स विश्वास गर्छन् ।
कोभिड १९ अर्थात् कोरोनाले हामीलाई के सिकाउँछ ? शीर्षकमा उनले लेखेको खुल्ला पत्र…